तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष5एक तिथि गर्न ढिलो हुँदा लागि बहाना
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 18 2020 |2मिनेट पढ्न
मिति लागि लेट भइरहेका खराब भाग मा प्रतीक्षा गरिएको छ जो व्यक्ति संग आमने-अनुहार आउँदै छ. जबकि यो गाह्रो हुन सक्छ, इमानदार सधैं सबै भन्दा राम्रो नीति छ. प्लस आफ्नो मिति साँच्चै समझ छ भने, त्यो / त्यो पूर्ण तपाईं पक्कै फाइदाको दिनेछु. तल, पाँच विश्वसनीय बहाना मिति गर्न लेट हुनुको लागि हो.
तपाईं बैठक ठाउँ धेरै पटक सक्दिँन गर्नुभएको, मार्ग कण्ठ, केही मिनेट प्रारम्भिक अझै तपाईं अझै पनि लेट छन् बाँकी. यो भारी यातायात वा थियो चाहे तपाईं हरेक रेड लाइट मारा, यो समय misjudging सजिलै forgivable छ कि एक इमानदार गल्ती हो.
सूरी प्रयोग जोगिन, म oftentimes गुगल मेरो अन्तिम गन्तव्य नक्शा र निर्देशन को एक तस्बिर लिन म जानुअघि. जबकि यो अनुमति दिन्छ उचित मिति तयारी समय, म कहिल्यै राम्ररी म बारी गर्नुपर्छ यस्तो चेतावनी दिए प्राप्त वा जहाँ ठीक मेरो अन्तिम गन्तव्य जो बारी मा lateness गराउँछ छ. फेरि, यस बारे अग्रिमसँग हुनुको सामान्यतया राम्रो हाँसो लागि बनाउँछ.
पार्किङ पाउन सकेन
शहर बस्ने oftentimes कुनै पार्किंग छ मतलब. जबकि यो पैदल दूरी एक स्थान छनौट गर्न आदर्श छ, oftentimes, सबैभन्दा रमाइलो मिति स्थलहरू टाढा एक सुविधाजनक पैदल दूरी छैन. यो परिस्थितिमा मा, यो पक्का गर्दा आफैलाई एक समय तरिका आइपुग्दा गर्न पर्याप्त समय दिन निकटतम पार्किंग संरचना पत्ता लगाउन सबै भन्दा राम्रो छ.
पत्रु बिरामी पायो
एक पाल्तु जनावर प्रेमी हुँदा (आषा आफ्नो मिति पनि छ), आफ्नो पाल्तु जनावर आफ्नो बच्चा छ. आफ्नो मिति अघि पोशाकहरू परिवर्तन गर्न घर आउँदै र मौसम अन्तर्गत जस्तो देखिन्छ जो आफ्नो पाल्तु जनावर मार्फत ठेस गर्दा, तपाईं स्वाभाविक तिनीहरूलाई सान्त्वना जाँदैछन्. जबकि यो सान्त्वनादायी अब अपेक्षा गरेको भन्दा बढी लाग्न सक्छ, दुवै तपाईं र तपाईंको पाल्तु जनावर सजिलो थप महसुस हुनेछ, विशेष गरी देखि तपाईं रात सामान्य भन्दा पछि हुन सक्छ.
काम लेट भाग्यो
पछिल्लो मिनेट आफ्नो काम हराएको रही एक impromptu परियोजनामा ​​सभाहरूबाट, यो सबै हामीलाई हुन्छ. यो विश्वसनीय क्षमा गर्नुहोस काम गर्दा, आफ्नो मिति लागि भनेर देख्ने रूपमा एक बानी मा गरिएका होइन कि निश्चित, काम आफ्नो सम्बन्ध भन्दा प्राथमिकता बढी छ.
जो तपाईंको क्षमा गर्नुहोस, यसलाई आफ्नो मिति सूचित गर्न महत्त्वपूर्ण छ तपाईं लेट हुनेछ. मात्र यो एक राम्रो इशारा छ, तर यो तपाईं एक मायालु व्यक्ति हुन् भनेर देखाउँछ.